प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयनमा आलटाल, विपक्षी दलको विरोध- समाचार - कान्तिपुर समाचार
प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयनमा आलटाल, विपक्षी दलको विरोध
कांग्रेस सांसद रिजालले भने, 'हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न कहिले गर्न पाइन्छ ?'
असार ३, २०७५ मकर श्रेष्ठ
काठमाडौँ — संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाले आफ्नै नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको छ । प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्था भएपनि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उक्त विषयको कार्यान्वयन नभएको हो ।
प्रधानमन्त्री वा उनका कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सांसदले प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले समय दिने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
नियमावलीको नियम ५६ कुल्चँदै सभामुख कृष्णबहादुर महराले शून्य समय सकाएर विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रमुख विपक्षी दलका सांसद् मिनेन्द्र रिजालले विरोध जनाए। 'आज असारको पहिलो बैठक बसिरहेको छ, नियममावली अनुसार आजको बैठकमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिन्थ्यो। खोइ नियमावली कार्यान्वयन भएको?' उनले भने, 'हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न कहिले गर्न पाइन्छ? जनताको अधिकार संसद्ले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ।'
सभामुख महरालेले उनको प्रश्नको जवाफ दिँदै 'यस विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएको हुनुपर्छ। कार्यव्यवस्था समिति बैठक राखेर छिटोभन्दा छिटो नियमावलीमा भएको व्यवस्था अघि बढाइने छ।'
हेर्नुहोस् नियमावलीको व्यवस्था
आजको शून्य समयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले साइकलमा तरकारी र फलफूल बिक्री गर्ने व्यक्तिहरुको साइकल जफत गरेको भन्दै सांसदले विरोध जनाएका छन्। 'काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ हजार मधेसीलाई खेदिरहेका छन्, जो गल्ली गल्लीमा तरकारी बेच्थे। उनीहरुका साइकल जफत गरिरहेका छन्' फोरमका सांसद प्रदीप यादवले भने, 'मधेसका गरिब जनता आफ्नो जीविका चलाउन काठमाडौंमा आएका हुन्, लखेट्ने काम नहोस्।'
अन्य सांसदले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेला विभिन्न नाका खोल्ने सम्झौता गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली मंगलबार चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ।
प्रकाशित : असार ३, २०७५ १२:०७
सुरु भयो सेलो नाटक मेला
काठमाडौँ — जंगबहादुरलाई जारले काटेको मिथमा आधारित नाटक ‘सोनाम ग्याल्मो’ को मञ्चनसँगै राजधानीमा शनिबारदेखि तीनदिने ‘सेलो नाट्य महोत्सव– २०७५’ सुरु भएको छ ।
महोत्सवको उद्घाटन गर्दै पूर्वसंस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलले काठमाडौं आसपास बस्ने तामाङ समुदायको जीवन र संस्कृतिका आयामलाई महोत्सवले फराकिलो बनाउने दाबी गरे ।
‘तामाङ समुदाय बौद्ध दर्शनसँग समेत जोडिएको’ भन्दै मन्त्री पोखरेलले आफू लामो समयदेखि बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने अभियानमा कटिबद्ध भएर लागिपरेको पनि बताए । उनले तामाङ समुदायको मौलिकता प्रबद्र्धनका लागि संग्रहालय बनाउनुपर्ने पनि सुझाए।
उद्घाटन अघि महोत्सवमा अतिथिलाई डम्फुरे र ताम्बा (संस्कृतिविद्) ले गीत गाउँदै थिएटर भित्र्याएका थिए । आगन्तुकलाई ग्रामीण तामाङ परम्पराअनुसार टोटलाको फूलको टीका लगाएर स्वागत गरिएको थियो । शिल्पी थिएटर परिसर पूरै तामाङ मौलिकतामा सजाइएको थियो । कोही तामाङ खानेकुरा गेङ, आलुम, खाप्से, गन्डु थोङसे, आईराक (तीनपाने रक्सी) लगायत चाख्दै थिए, कोही पुस्तक र मौलिक भेषभूषाको स्टलमा रमाउँदै । धेरैले आइराक ताङ (परम्परागत रूपमा रक्सी पार्ने भाँडो) छेउ सेल्फी खिचे । नेपाली मौलिक रंगमञ्च प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सेलो फाउन्डेसनले गरेको महोत्सव अवधिभर पाँच नाटक र दुई कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने बताइएको छ ।
पहिलो दिन मञ्चन गरिएको ‘सोनाम ग्याल्मो’ ले जंगबहादुरलाई जारले काटेको तामाङ मिथलाई अहिलेको जीवनसँग जोडेर प्रस्तुत गरेको थियो । फूलमान वलको लेखन र सोनाम लामा मोक्तानको निर्देशन रहेको नाटक विवाहमा बेहुला र बेहुली राखेर चारदाम (वैवाहिक जीवनको कसम खुवाउने विधि) गर्दै गर्दा फ्लासब्याकमा जान्छ । त्यसपछि सर्लाही पत्थरघट्टा आसपासको पुरानो तामाङ समाज र जीवनको उत्तराद्र्धमा त्यही ठाउँमा सिकार खेल्न गएका जंगबहादुरबीचको संघर्षले नाटकलाई गति प्रदान गर्छ । मुख्य पात्र छन्– भर्खरै विवाह भएको सोनाम र ग्याल्मो । ग्याल्मोलाई जंगबहादुरले मन पराएर हरण गरेपछिको पीडादायी सन्दर्भ र उनैले बनाएको ‘जार काट्ने कानुन’ टेकेर आइपुग्ने सोनामबीचको उतारचढाव नाटकमा लोभलाग्दो छ ।
नाटकमा सोनाम लामा, शान्ति वाइबा, फूलकुमार बम्जन, सुसन लामा, चाँदनी लामा, निकिता वाइबा, निशा पाख्रिन, मातृका घिमिरे, मनोज तामाङ, सन्तोष तामाङ (बोन्बो), सञ्जीव राई, देविन चौधरी, विजय टुबा, सुनील तामाङ, साजन लामालगायतले अभिनय गरेका छन् । आइतबार अमृत योञ्जनको कार्यपत्र प्रस्तुतिसँगै धादिङ जिल्लाको तामाङ समुदायमा प्रचलित ‘ताचेमा’ लोकनाटक र वसन्त चौधरीको कविता ‘ङाला फ्रेङबा धोङला टा’ को मञ्चन गरिने बताइएको छ ।
नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्त श्रेष्ठले तामाङ समुदायको रंगमञ्च उत्थानका लागि महोत्सवले फलदायी हुने दाबी गरे । पूर्वमन्त्री सूर्यमान दोङ, पूर्वराजदूत डा. गणेश योञ्जन र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका रंगमञ्च विभाग प्रमुख पुष्कर गुरुङले महोत्सवको प्रशंसा गरे ।
प्रकाशित : असार ३, २०७५ १२:०३